Blog of Nyein Chan Yar: 2007.08
In order to drive these devils away, you should beat any metal thing at,
1) September 11, 2007 Tuesday night 7:02 pm
2) September 12, 2007 Wednesday night 8:01 pm
3) September 13, 2007 Thursday night 9:00 pm
Please read complete announcement here and spread the word.
Taken from here. [MayNyane.blogspot.com]
Posted by dathana at Friday, August 31, 2007 1 comment:
I couldn't blog these days for I am busy and sick. I eat justanew ache of life everyday. One day after another...
These days, the weather here is no good at all. 88 generation student leaders were detained by SPDC for their peaceful and silent walk strike after fuel price hike. Again and again everybody who did non violent movement hurt. Has the truth to be hurt always?
My friend forwarded me some photos of non violent movement on 22nd Aug. Here are some of them.
မဇ္ဈိမ သတင်းဌာနမှ အချိန်နှင့် တပြေးညီ ထုတ်လွှင့်ပေးနေသည်။
Posted by dathana at Thursday, August 23, 20072comments:
ISS015-E-21740 (10 Aug. 2007) --- This view of the Space Shuttle Endeavour clearly shows its payload bay and upper surfaces. The image was photographed by one of the Expedition 15 crewmembers aboard the International Space Station shortly before the two vehicles docked in Earth orbit. Endeavour is contributing toward space station construction by deliveringathird starboard truss segment, S5, and supplies inside the SPACEHAB module (in the center of the bay) and the external stowage platform 3. A Russian spacecraft, docked to the station, can be seen in the right foreground
Posted by dathana at Friday, August 17, 2007 1 comment:
I had triedacouple of unit conversion tools on my PC until I tried this small program called "convert". But this one is so cool that I'm not going to find any new one. It includes many conversions with cool interface. It is portable, light, fast and user friendly. And it is freeware.
Convert isafree and easy to use unit conversion program that will convert the most popular units of distance, temperature, volume, time, speed, mass, power, density, pressure, energy and many others, including the ability to create custom conversions!Convert isafree and easy to use unit conversion program that will convert the most popular units of distance, temperature, volume, time, speed, mass, power, density, pressure, energy and many others, including the ability to create custom conversions!
Posted by dathana at Thursday, August 16, 20073comments:
ဒီနေ့လည်း တိုတိုထွာထွာ လေးတွေပဲရေးအုံးမယ်။
အရင်အပတ်က ကုမုဒြာ ဂျာနယ်မှာ blogger တွေအကြောင်း ရေးထားတာ တွေ့လို့ ၀ယ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ရှေ့မျက်နှာမှာ myalwar ဆိုတဲ့ blog ကိုဖွင့်ကြည့်နေတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို နောက်ကျောကရိုက်ထားတဲ့ပုံ။ ရီရတယ်။ ပုံထဲက monitor မှာ မြန်မာစာတွေက question mark တွေပဲပေါ်နေတယ်။ fontမရှိတာများ ပုံကို ဒီတိုင်းရိုက်ရသလား။ qualityဆိုတာကို မသိတာလား။ ပရိသတ်ကို ဂရုမစိုက်တာလား။ ကဲပါ။ ထားလိုက်ပါတော့။ ဆောင်းပါးထဲမှာ မန္တလေး ဘလော့ဂါ ထဲက ကြုံဆုံမိသမျှ၊ ဇော်မိုးအောင်၊ chaweimahn၊ yadanarcho တို့နဲ့ဗျူးထားတာ ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင် ဂျာနယ်တွေက blog တွေကို တော်တော် စိတ်ဝင်စားနေကြပုံရတယ်။ ဒွေးဆုံးတုန်းကလည်း မေဓာဝီလို ဒွေးသတင်းရေးတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ အကြောင်း ဂျာနယ်တွေမှာ တော်တော် ပါလာတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဟိုတလောက မန္တလေးမှာ လုပ်တဲ့ seminarကြောင့် ထင်ပါတယ်။ ဂျာနယ်လစ်တွေကို ဖိတ်ပြီး ပြလိုက်တယ် ထင်ပါတယ်။ ခုနက bloggerတွေထဲက ချောအိမာန်က စာရေးဆရာမပါ။ ဟိုတစ်နေ့ကပဲ သူ့ရဲ့ ဝတ္ထုတိုစာအုပ် အသစ်ထွက်တာတွေ့တယ်။
God and command line
According to this page, God created everything through the command line onacomputer. It's very funny. LOL !!!!!!
ဒီဆင်ဆာက ဘာသဘောလည်း မသိဘူး။ ဒီက TV channel တွေမှာပြောပါတယ်။ ကိုရီးယား series တွေမှာဆိုရင် ရည်းစားတွေ နမ်းရင် ဖြတ်တယ်။ Lip kiss ဆိုရင်တော့ မပြောနဲ့တော့၊ ပါးကိုနမ်းတာကိုပဲ ဖြတ်တာ။ ကောင်မလေးက ပါးကိုကိုင်ပြီး ရှက်သလိုဖြစ်သွားရင် နမ်းလိုက်လို့ပဲ လို့နားလည်ပေးနေရတယ်။ ဒီ့ထက်ကြောင်တာ ရှိသေးတယ်။ ပါးရိုက်လိုက်ရင် လည်းဖြတ်တယ်။ ဒါလည်း ပါးကိုကိုင်ပြီး နာနေသလိုဖြစ်နေရင် ပါးရိုက်လိုက်လို့ နားလည်ပေးရတယ်။
ကျွန်တော်ထင်တာပြောမယ်နော်။ ကြိုင်ကြိုင်က သန်းရွှေကို တစ်ခါမှ မနမ်းဖူးဘူးတဲ့။ အဲဒါ သန်းရွှေက TVမှာ သူများတွေနမ်းတာမြင်တိုင်း စိတ်နာလို့ TVမှာ နမ်းတာမပြရလို့ အမိန့်ထုတ်ထားတာ။ နောက်ပြီး ကြိုင်ကြိုင်က သန်းရွှေကို တစ်ချိန်လုံး ပါးချနေတာ။ သန်းရွှေက TVမှာ သူများတွေ ပါးချတာ မြင်တိုင်း ရင်နာလွန်းလွန့် ဆိုပြီး TVမှာ ဘယ်သူမှ ပါးမချရလို့ အမိန့်ထုတ်ထားတာဒဲ့။ :D
Posted by dathana at Friday, August 10, 20076comments:
Labels: commentary, ho-ho-d-d
Posted by dathana at Thursday, August 09, 2007 1 comment:
Posted by dathana at Wednesday, August 08, 20073comments:
အသံထက်မြန်တဲ့ speedကို ရောက်ခါနီးမှာ compressibility effect ကြောင့် လေဖိအားနဲတဲ့ အလွှာပါးပါးလေးတစ်ခု ဖြစ်တဲ့အခါ ငွေ့ရည်ဖွဲ့တဲ့ ပုံပါ။ စက္ကန့်ပိုင်းပဲ ကြာတတ်ပါတယ်။
Posted by dathana at Monday, August 06, 2007 1 comment: